Faallo kooban: Heesta ‘Hayga dudine soo noqo’ W/Q: Ibraahin Xuseen Daa’uud “Masxaf” | Laashin iyo Hal-abuur
Faallo kooban: Heesta ‘Hayga dudine soo noqo’
Dudmo waa xaalad dareen oo ay la kulmaan haweenku. Dudmadu badanaaba waxa ay la xidhiidhaa arrin tabasho oo dhinaca gabadha ah. Dareenka ay heestu ka hadlayso ayaa daaran nin ay gabadhiisa dudmo kaga maqan tahay. Dudmada intii ay kaga maqneyd sida uu xaalkiisu noqday iyo waxa uu la kulmey ayuu ka warramayaa. Waxa uu tilmaamayaa in ay u ahayd kartidii iyo awoodii hankiisa nololeed ku lammaaneyd. Waxa uu tibaaxayaa in uu tebay dhiirrigelisadiisii nolosha. Ka fogaansheedu in uu darxumo iyo kala daadsanaan nololeed kala kulmay ayuu carrabaayayaa. Waxa uu u sheegayaa wanaag iyo farxad badan oo ay nolosha wada qaadan doonaan in uu u danbeeyo. Sida oo kale waxa uu u sheegayaa ruux ay nolosha la wadaagtey oo ay nolosha rafiiq ku soo ahaayeen in uu raalligelintani u soo direy. Waxa uu yidhi:
Karti laygu darayey
Han dedaal yidhaahdiyo
Durba tabaye meeday?!
Sidaad iiga durugtaan
Dayac tira daryeelaay
Farxad lagu dalxiisiyo
Wanaag ba dambeeyoo
Qalbi aad la daristaa
Raalligelinta soo diray.
Bani’aadamku in uu wax isku qabto oo si wax ugu kala aragti duwanaado waa u abuur Rabbi. Iyada oo ay taasi jirto haddana, kolka labada qof ay yihiin nolol-wadaag waa muhiim in uu dhexdooda jiro isku soo dhawaansho iyo isku tanaasul. Waxa uu yidhi:
Laba dani dhextaallaa
Marmar inay is diidaan
Daa’iniyo ilaa abid
Waa dabeecad aadmiye
Hayga dudine soo noqo.
Soomaalida ayaa murti u tidhi: “Carrab iyo labadiisa daan baa iskugu dhaw oo iyana waa isqaniinaan”. Kolka dhallinyaro la yahayna wax badan oo waayeelka agtooda macno buuran ka lahayn ayaa lagu kala tagaa.
Da’yartii is xulatee
Dookh laysku raaciyo
Dareen uu mideeyaa
Kolkol hadal ka duulaa.
Wadajirka, isku duubnaanta iyo isku soo dhawaanshuhu waa xal ka mid ah waxyaabaha labada ruux isku soo jiidi kara. Soomaalida ayaa hore u tidhi: “Haddii aan la kala roonaan roob ma da’o”. Labada ruux haddii aanu midkood roonaan oo dulqaad, isfahan iyo garasho dheeri ah la iman; dhismaha qoyskaasi ma sii jiro, soo noqoshana hadalkeeda ba ha sheegin. Waxa uu yidhi:
Haddaan laysku duubnaan
Ma ogtahay daleediyo
Qof ba daraf hadduu jiro
Dugsi kama helaayee?!
Sirtu waa dulqaadkiyo
Isku durugga garashada
Ha iga dudine soo noqo.
F.G: Heestani oo dhawaan soo baxday waxa ereyadeeda curiyey abwaan Cabdiraxmaan Abees. Codkiisa qiimiga badanna waxa inoogu soo gudbiyey fannaanka Axmed-Aarshe.
W/Q: Ibraahin Xuseen Daa’uud “Masxaf“